El Clasico: Barcelona oo ku durdurisay Real Madrid - Faahfaahin (Daawo) | KEYDMEDIA ONLINE
El Clasico: Barcelona oo ku durdurisay Real Madrid - Faahfaahin (Daawo)
London (Keydmedia) - Kooxda Barcelona ayaa iska jaftay boorki kasoo gaaray gool uu daqaaqadi koowaad ka dhaliyey Karem Benzema oo noqday goolki ugu dhaqsiyaha badnaa ee laga dhaliyo ciyaarta loo yaqaano El Clasico ee Real iyo Barca, kadib marki ay ugu badashay 3-1.
Real waxay ka sareysay sadex dhibcood oo nadiif ah kooxda Barcelona walina waxaa u harsan hal kulan, iyada oo sidaasi maanka ku heysay ayey garoonka gashay waxaa markiiba ilbiriqsigi 23-aad ee ciyaarta gool siiyey Karim Benzema marki uu qalad sameeyey goolhaye Victor Valdes.
Laakin ciyaarta oo kululeyd, dad badana ay saadaalinayeen in Barcelona la cuni doono ayaa waxaa goolki bareejada u keenay weeraryahanka u dhashay dalka Chile ee Alexis Sanchez.
Waxaa xigay gool ka nixiyey Real oo uu shabaqa ku tuuray Xavi hase yeeshee kusii dhacday daafaca Rea; Marcelo kadibna si tartiib ah u gashay shabada uu waardiyaha ka ahaa goolhaye Kasillas.
Labadaasi gool ee laga dhaliyey kooxda Real waxa ay ahaayeen kuwo aad u fududaa oo aanan la fileyn, waxaase gool cajiib ahaa ku soo qatimay Cesc Fabregas oo madaxa ku dhameystiray kubad uu usoo karoosay Dani Alves.
Wax yar ka hor goolkaasi waxaa fursad dahabi aheyd ka qasaariyey Real laacibkooda Cristiano Ronaldo isaga oo helay banooni uu kaligiis ku helay goolka.
Ronaldo waxay u aheyd habeen murugo leh maxaa yeelay laba fursad oo uu ku kala dhalin karay laba gool ayuu cunay, waxaa sidoo kale uu qasaariyey laad xor ahaa oo goolka banaankiisa hore loo dhigay.
Natiijadaasi waxay keentay in kooxda uu wato macalin Pep Guardiola ay la wareegaan hogaanka horyaalka, laakin naadiga tababare Jose Mourinho oo hada qeyb ka wado hogaanka maadaama ay isku dhiba yihiin Bara ayaa waxaa u harsan kulan aysan wali ciyaarin.
Barca hada waa koox aanan loogaga badin lixdi kulan ee ugu danbeysay garoonka Santiago Bernabeu, sidoo kale Barcelona iyada ayaa ku gacan sareysay dhamaan kulamadi ay Real la ciyaartay sanadihi ugu danbeeyey.
Real ayaa hada quudareyneyso in ay qaado horyaalka markeedi ugu horeeyey tan iyo sanadki 2008, kulanki xalayna waxaa lagu tilmaamay kii ugu adkaa ee labada koox isku haleelaan ciyaarta loo yaqaano Clasico.
Caasimada dalka Spain xalay waxa ka jiray qabow qalalan sidaasi oo ay aheyd garoonka waxaa soo xaadiray 85,000 oo taageerayaal ahaa.